निको निको डोगा डाउनलोडर - निकोनिकोबाट एनिमे भिडियोहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईं पुरानो संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो संस्करण स्थापना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 2.0.1
निको निको डोगा डाउनलोडर
❝निकोनिकोबाट एनिमे भिडियोहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्❞
➶ यस साइटले तपाईंलाई भिडियो URL प्रविष्ट गरेर कुनै पनि निकोनिको भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
भिडियो यूआरएलको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र माथिको बक्समा टाँस्नुहोस्, त्यसपछि निकोनिको डाउनलोडरले भिडियो तुरून्त फेला पार्नेछ। डाउनलोड लिंकमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र निकोनिको भिडियोहरू स्थानीय डिस्कमा बचत गर्नुहोस्।
सरल निकोनोको डाउनलोडर
यो विस्तारले तपाइँलाई निकोनोकोबाट भिडियोहरू, अडियो, छविहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
NicoNico भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
म भन्न सक्दछु कि तपाईं निकोनिको एनिमेको पनि ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले यहाँ आफ्नो मार्ग भेट्टाउनुभयो। निकोनिको एक उत्कृष्ट जापानी भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म हो, हजारौं चाखलाग्दो र भयानक भिडियोहरू प्रदान गर्दछ। यद्यपि, हामी केवल निकोनिको भिडियो अनलाइन हेर्न सक्छौं र निकोनिको भिडियो र अडियो आधिकारिक तरिकामा डाउनलोड गर्न गाह्रो छ। त्यस कारणका लागि, हामी तपाईंलाई निकोनिको भिडियो र अडियो उत्तम निकोनिको भिडियो अनलाइन डाउनलोडरसँग डाउनलोड गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं।
निकोनोको भिडियोको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्।
ब्राउजर विस्तार / एड-अनको साथ निकोनिकोबाट नि: शुल्क डाउनलोड भिडियोहरू
निकोभिडियो वेबसाइट खोल्नुहोस्।
निकोनोकोमा भिडियो प्ले गर्नुहोस्। डाउनलोड लिंक प्राप्त गर्न प्लेयरमा भिडियो गुण बदल्नुहोस्।
यो विस्तार खोल्नुहोस्।
निकोनिको, पहिले निको निको डुगा भनेर चिनिन्थ्यो, एक प्रसिद्ध जापानी भिडियो स्ट्रिमिंग साइट हो जहाँ प्रशस्त भिडियो च्यानलहरू छन्, जस्तै मनोरन्जन, संगीत, जीवन, खेल, एनिमे, कला, खेलहरू र यस्तै। भिडियोहरू हेर्न, अपलोड गर्न, र साझेदारी गर्नका साथै निकोविडियोको मुख्य आकर्षण यो हो कि यसले दर्ता गरिएका प्रयोगकर्ताहरूलाई बुलेट स्क्रिन पठाउन अनुमति दिन्छ, टिप्पणीहरू प्रत्यक्ष भिडियोमा ओभरलाइड हुन्छन् र विशेष प्लेब्याक समयमा सिन्क हुन्छन्, जुन फेशनको प्रवृत्ति देखाउँदछ।
निकोनिकोको लागि भिडियो डाउनलोडर
निकोनिको (nicovideo.jp) सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको जापानी भिडियो साझेदारी साइटहरू मध्ये एक हो। हामीले यस निकोभिडियो डाउनलोडरमा ठूलो प्रयास राख्यौं, त्यसैले तपाईं निकोन्डिकोबाट केहि पनि सेकेन्डमा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि डाउनलोड गरिएका सबै फाईलहरू व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र हुन्।
उच्च परिभाषा निकोनिको भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
निकोनिकोबाट उत्तम गुणमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। नि: शुल्क एनिमे चलचित्र र एनिमे भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् निकोलिडियोबाट कुनै समस्या बिना।
खोज बारमा कुञ्जीशब्दहरू टाइप गर्नुहोस्, सम्बन्धित निकोनिको भिडियो देखा पर्नेछ। यी साधारण उपकरणहरूको साथ अफलाईन प्रयोगको लागि तपाइँको मनपर्ने निकोनिको भिडियो बचत गर्नुहोस्।
निकोनिको डाउनलोडर गुगल क्रोम, फायरफक्स, आईई, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसफ्ट एज, यूसी ब्राउजर र कुनै पनि वेब ब्राउजरमा राम्रोसँग काम गर्दछ। थप रूपमा, यो म्याक अपरेटिंग प्रणालीसँग अत्यधिक उपयुक्त छ।
निकोनोको अडियो एक्स्ट्रक्टर
निको निको डुगाबाट अडियो निकाल्नुहोस् र यसलाई बचत गर्नुहोस्।
निकोनोको थम्बनेल डाउनलोड गर्नुहोस्
NicoNico थम्बनेल पूर्ण आकार 720p डाउनलोड गर्नुहोस्।
यहाँ तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी निकोनोको भिडियो डाउनलोड गर्ने?
+ निकोभिडियो भनेको के हो?
निकोनो (जसलाई निकोभिडियो वा निकोनिको पनि भनिन्छ) पहिले निको निको डुगा पनि भनिन्थ्यो। यूट्यूब जस्तै, यो एक भिडियो साझेदारी साइट हो जुन जापानमा लोकप्रिय छ। निकोनिको वा निकोनिको भनेको जापानीमा हाँस्दै छ।
+ निकोभिडियोबाट एनिमे भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने?
एनिम भिडियोहरू अफलाइन हेर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं निकोनिकोबाट एनिमे भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। निकोनिको जापानको सबैभन्दा anime वेबसाइट हो।
यस वेबसाइटले एनिमे, भोकलॉइड, मनोरन्जन, र संगीत सहित बहु च्यानलहरू समावेश गर्दछ। यस वेबसाइटमा, तपाईं जहिले पनि सबैभन्दा लोकप्रिय एनिमे चलचित्रहरू, एनिमे श्रृंखला र एनिमे भिडियोहरू नि: शुल्क हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ, नारुतो शिपुडेन, एक टुक्रा, ब्लीच, ड्र्यागन बॉल जेड, फेयरी टेल, स्किप बीट, शुगो चारा, फुलमेटल अल्केमिस्ट र अधिक। र साथै, निकोनोको नम्बर १ स्थान हो जुन जापानी निर्माताहरूले बनाएका अत्यन्तै नयाँ भोकलॉइड गीत अपलोडहरू फेला पार्न।
यदि तपाईं कुनै पनि समयमा र कहिँ पनि अफलाईन हेर्न निकोभिडियो डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले पहिले एक विश्वसनीय निकोभिडियो डाउनलोडर फेला पार्न आवश्यक छ। यहाँ हामी तपाईंलाई उत्तम नि: शुल्क निकोनोको भिडियो डाउनलोडर प्रस्तुत गर्दछौं।
+ क्वालिटी नगुमाईकन मिकोमा निकोविडियो कसरी डाउनलोड गर्ने?
हाम्रो निकोनोको डाउनलोडरले तपाईंलाई गुणवत्ता हराउन बिना पूर्ण HD 1080p भिडियोहरू बचत गर्न स्वचालित रूपमा फाईलहरू मर्ज गर्न मद्दत गर्दछ।
+ निकोभिडियो (निको निको डुगा) बाट एनिमे गीतहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
निकोभिडियो वा केवल निकोनोको, सबैभन्दा लोकप्रिय जापानी भिडियो साझा गर्ने वेबसाइट यूट्यूबको समान हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले धेरै मनोरन्जन भिडियो क्लिपहरू हेर्न सक्दछन्। YouTube बाट निकोभिडियोमा के भिन्नता छ भन्ने छ कि निकोभिडिओमा अधिकतर सामग्री जापानी पप संस्कृति (एनिमे, भिडियो-खेलहरू, जापानी पप संगीत भिडियोहरू आदि) मा केन्द्रित छ।
समय-समय, निकोनोकोमा, त्यहाँ एनिम संगीत भिडियोहरूको एक जोडी छ जसमा एनिमे गीतहरू छन् जुन तपाईंलाई साँच्चिकै मनपर्दछ र तपाइँको एमपी3प्लेयर राख्न वा सीडीमा जलाउन चाहानुहुन्छ। तर यी मध्ये केही अनुपम छन् र यो सँधै गीत आफैंमा डाउनलोड गर्न सम्भव छैन।
निकोभिडियोबाट संगीत भिडियो डाउनलोड गर्न धेरै भिन्न समाधानहरू र विधिहरू छन् तर तपाईंलाई वास्तवमै चाहिने कुरा नि: शुल्क निकोनो एमपी3कन्भर्टर हो जसले तपाईंलाई लोकप्रिय जापानी भिडियो साइटबाट अडियो र संगीत ट्र्याकहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
+ निकोभिडियोबाट उच्च गुणवत्ता अडियो कसरी बचत गर्ने?
निकोविडियो डाउनलोडरले स्वत: 192kbs गुणवत्ता अडियो डाउनलोड लिंक निकोभिडियो वेबसाइटबाट उपलब्ध फेला पार्नेछ र देखाउनेछ।
+ के हुन्छ यदि म nicovideo.jp बाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्दिन?
यदि तपाईं निको निको डुगा भिडियोहरू सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं भिडियो क्लिपिंग सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको भिडियो क्लिपहरू रेकर्ड गर्न।
+ के म मेरो उपकरणमा डाउनलोड भिडियो प्ले गर्न सक्छु?
सामान्यतया, भिडियो डाउनलोडरले nicovideo.jp बाट MP4 भिडियो फाइलहरूमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्दछ, र तपाईं डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू तपाईंको मोबाइल उपकरणमा कुनै समस्या बिना नै प्ले गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
+ के म डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू मेरो साथीहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छु?
Nicovideo.jp बाट भिडियो डाउनलोड पछि, तपाईं केवल व्यक्तिगत प्रयोगको लागि भिडियोहरू लिन सक्नुहुनेछ, तर यसलाई सामाजिक नेटवर्कमा साझा नगरी वा अर्को साथीलाई सिधा पठाउनुहोस्।
+ के भिडियो डाउनलोडरले डाउनलोड गरिएका भिडियोहरूको प्रतिलिपि बचत गर्दछ?
भिडियो डाउनलोडर वेबसाइट, अनुप्रयोग वा प्रोग्रामले तपाईंले डाउनलोड गर्न लाग्नु भएको फाइलको कुनै प्रतिलिपि बचत गर्दैन। भिडियो डाउनलोड पछि, तपाईं आफैले भिडियोको प्रतिलिपि बनाउन सक्नुहुन्छ।
+ के यो nicovideo.jp बाट भिडियो डाउनलोड गर्न कानूनी हो?
यो nicovideo.jp को नियम र सर्तमा निर्भर गर्दछ। प्रतिलिपि अधिकारमुक्त भिडियोहरूको लागि, प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूलाई उचित प्रयोगको लागि सजीलै डाउनलोड गर्न सक्दछन्; प्रतिलिपि अधिकार-सुरक्षित भिडियोहरूको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले भिडियो मालिकबाट अनुमतिहरू सोध्नुपर्नेछ।
+ Mp4 1080p को रूपमा निकोनिको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने?
निकोविडियोले एकल फाईलको रूपमा 1080p पूर्ण एचडी गुणस्तर भिडियो प्रदान गर्दैन, त्यसैले तपाईलाई निकोटीको डाउनलोडर mp4 1080p डाउनलोड गर्नका लागि स्थापना गर्नु पर्छ।
+ के निकोनोको डुगाबाट भिडियोहरू / एमपी3डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
निकोनोको डाउनलोडर स्थापना गर्नुहोस्, तपाईंले निकोभिडियोमा हेरिरहनु भएको भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाइँ एनीमे श्रृंखला हेर्न र तपाइँको HD क्वालिटी भिडियोहरू हेर्न प्रिमियम खाता हुन सक्षम हुन लगइन हुन आवश्यक छ।
+ निको लाइभ के हो?
निको लाइभ एक प्रत्यक्ष स्ट्रिमि internet इन्टरनेट सेवा हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरू प्रत्यक्ष कार्यक्रममा हेर्न र प्रसारण गर्न सक्दछन् र सबै वास्तविक समयमा टिप्पणीहरू पोष्ट गर्न र हेर्न सक्दछन्।
+ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा आईफोन, आईप्याडमा निकोनोको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने?
यदि तपाईं एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं फायरफक्सको लागि निकोनोको डाउनलोडर विस्तार स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
यदि तपाईं आईफोन वा आईप्याड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले शीर्षमा इनपुट बक्समा निकोभिडियो लि enter्क प्रविष्ट गर्नु आवश्यक छ।
Niconico अनलाइन डाउनलोडर - निकोनिको भिडियो र MP4 / MP3 नि: शुल्क नि: शुल्क अडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
हालका वर्षहरूमा धेरै व्यक्तिहरू गुनासो गर्छन् कि तिनीहरू जहिले पनि नेटवर्क बफरिंग वा भीड, कम भिडियो गुणस्तर, विभिन्न प्रतिबन्धहरू, आदि खराब प्रयोगकर्ता अनुभव जस्ता मुद्दाहरूको पूरा गर्छन्। त्यसकारण, व्यक्तिहरू अझ राम्रो अफलाइन आनन्दको लागि निकोनिको भिडियो डाउनलोड गर्न समाधान खोज्न उत्सुक छन्! तपाई यहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ।
मलाई लाग्छ कि यो सजिलो, सरल र धेरै राम्रो add-on हो। यो निकोफक्स भन्दा राम्रो छ।
मेरो संग्रहमा एनिमेसन श्रृंखला डाउनलोड गर्न र बचत गर्न मद्दत गर्ने महान उपकरण।
यो विस्तारले मलाई निको निको डुगाको गीतहरू सुविधाजनक रूपमा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
निकोनिको भिडियो डाउनलोडर 2022